Ngisilungisa kanjani isikrini esiluhlaza okwesibhakabhaka ku-CS GO? - Imibuzo Evame Ukubuzwa
Main > Imibuzo Evame Ukubuzwa > Isikrini esiluhlaza se-Csgo - izimpendulo ezinkingeni
Isikrini esiluhlaza se-Csgo - izimpendulo ezinkingeni
Ngisilungisa kanjani isikrini esiluhlaza okwesibhakabhaka ku-CS GO?
Ungayilungisa kanjani i-CSGO Blue ScreenAmaphutha ku-Windows 10
Isinyathelo 1: Landa Ithuluzi Lokulungisa i-PC ne-Optimizer (i-WinThruster ye-Win 10, 8, 7, Vista, XP kanye no-2000 - Microsoft Gold Certified).
Isinyathelo 2: Chofoza u- “Start Scan” ukuthola izingqinamba ze-Windows registry ezingadala izinkinga ze-PC.
Isinyathelo 3: Chofoza 'Lungisa Konke' ukuzelungisazonke izingqinamba.
- Ngakho-ke mhlawumbe uke wazama umhlahlandlela wokuthi ungazilungisa kanjani izikrini zakho eziluhlaza okwesibhakabhaka zokufa, uke wazama ukushintshanisa imemori stick, futhi uzame nokushintsha amandla kagesi. Kulungile, ezinye zazo zingalungisa izinkinga zakho, kepha uma usenalezo zikrini zokufa eziluhlaza okwesibhakabhaka namhlanje sizobheka ezinye zezinkinga ezixakile engihlangabezane nazo selokhu ngaqala ukwakha ama-PC, futhi kunjalo , Ungazilungisa kanjani lezi zinkinga. (umculo ojabulisayo) Siyakwamukela futhi ku-Tech Yes City, futhi umagazini wokuqala esizobhekana nawo ukungahambi kahle.
Lokhu kungaphakamisa ikhanda lakho ngaphezu kokucabanga kwakho, ikakhulukazi ngo-2018 lapho i-AMD ne-Intel baba nenhlanhla yokugoqa ngangokunokwenzeka kuma-CPU abo, ikakhulukazi lapho kukhulunywa ngama-CPU wabathengi afana nochungechunge lweRyzen 2000 kanye nochungechunge lwe-i7 kufanele kube. Lokhu kukhishwe ngaphandle kwebhokisi ngolaka kuze kufike ezingeni lapho kunganciphisa khona ukubuyiswa. Izimo lapho ukunikezwa kwamandla kuyisabelomali esingahle sibe nenani elide lokuxebuka, okuyinkinga yonke uqobo ngokwalo ngokushintshashintsha kwamazinga kagesi okuthi ezimweni ezithile angawela ngaphansi kwesilinganiso sevolthi ejwayelekile, ivikele ikhompyutha yakho kumlawuli ohlaza okwesibhakabhaka odonsa amandla ngqo kusuka i-adaptha yakho yamandla bese uyiguqula ibe namandla iprosesa yakho engayisebenzisa.
Konke lokhu kungaholela esimweni lapho iyunithi lakho eliphakathi lingasenamandla kagesi anele okusebenza ngisho nangamasethingi azenzakalelayo. Ukulungisa lokhu, vele uye ku-BiOS, ngakho-ke shaya okuthi susa noma ukhiye we-F2 lapho ikhompyutha yakho ikuvumela futhi uma ikhompyutha yakho ikuvumela, okuma-boardboard amaningi wesimanje yi-hardware enamabhuzu amasethingi we-non-turbo ngakho-ke akufanele ushayeke ngaphambi ungene ku-BiOS. Bese vele uye engxenyeni lapho izilungiselelo zakho zamandla we-CPU zikhona ngemuva kwalokho bese ushaya inkinobho yokuhlanganisa noma yokususa kuphedi yakho yenombolo bese uzama ukuthi kufanele ukwenyuse lokhu ngaphezu kwe-ettings ezenzakalelayo.Voila, ungakwazi ukuvalelisa lezo zikrini eziluhlaza okwesibhakabhaka.
Ngaphambi kokuthi siqhubekele enkingeni yesibili nokho, lapho uvakashela amawebhusayithi amaningi owavakashelayo futhi ungahle ufune ileveli ehlukile yamaphasiwedi wamawebhusayithi asuka kumawebhusayithi ongawethembi nakancane kumawebhusayithi angawakho Uma unemininingwane yasebhange, umxhasi we-athikili yanamuhla i-LastPass angakusiza kakhulu. Ngivame ukuvakashela amawebhusayithi angabalulekile kangako kimi, kepha ngiyakujabulela ukufunda, izindaba nezinkundla, futhi eziningi zazo zidinga amagama abasebenzisi namaphasiwedi ozowakhohlwa ngenjabulo. Uma ungafuni ukukhohlwa ngakho, i-LastPass ingenza ngokuzenzakalela amaphasiwedi ahlukile kuwo wonke amawebhusayithi owavakashelayo. bese uyigcina efwini eliphephile bese ugcwalisa ngokuzenzakalela lawa mawebhusayithi ukuze wenze impilo yakho ibe lula kakhulu.
Bengilokhu ngisebenzisa le sevisi isikhashana manje futhi ivikele amakhanda amaningi futhi inzuzo eyengeziwe ukuthi ungaba nawo wonke lawo maphasiwedi aphephile alawa masayithi owabelana ngawo nabangani bakho abathembekile. Isibonelo, i-akhawunti yokungena ngemvume yeNVIDIA NDA yokulandwa komshayeli, lapho-ke ungabelana kalula ngephasiwedi nabanye abasebenzisi beLastPass futhi wazi kahle ukuthi wabelana nobani. Futhi abazi ukuthi iphasiwedi isetshenziswe kanjani ngqo.
Ngakho-ke uma uzizwa sengathi awusafuni ukwaba i-akhawunti, ungavele ubanqume. Futhi le sevisi imahhala ngokuphelele ukuzama, izixhumanisi encazelweni engezansi. Inombolo yesibili, ukulala ubusika bonke.
Amakhompiyutha avame ukungena ebusika, futhi izilungiselelo ze-Windows ezizenzakalelayo zivumela ikhompyutha ukuthi ingene kumodi ebizwa ngokuthi ubusika, lapho ikhompyutha isesimweni esinamandla amancane okusebenzisa amandla futhi ilungele ukubuyela empilweni lapho ucindezela ukhiye Kukhona ezinye izilungiselelo ezinjengezimbobo ze-USB nezikhala ze-PCIe kubhodi yakho yomama engakhubazeka futhi, yize ingathola ukukhohlisa okuncane lapha. Amanye amandla kagesi wesabelomali awasekeli ngempela amandla kagesi aphansi, ukunika amandla i-CPU uma ikule modi, ikhompyutha ayivuki ngemuva kokucindezela ukhiye. Lokhu kungalungisa ikhanda layo elibi ngqo, ikakhulukazi ngemuva kokwethulwa kwama-Intel CPUs esizukulwane sesine isb.
Ama-CPU afana ne-i7-4770, i5-4670K, i5 -6400 njll, lapho i-Intel yethule le modi yokonga amandla ebizwa nge-C7. Ukusebenza ngale nkinga nokuyivimba ukuthi ingabi yinkinga, ungenza enye yezinto ezimbili, noma ungene kwi-bios bese usetha isimo sakho esiphansi se-C sibe yi-C3, noma uma usebenzisa i-laptop ngincoma i-C6 to Saving energy, engihlala ngikwenza, noma ungashintshela ku-Windows, noma-ke ungakwenza kokubili, engikwenza kukhompyutha yami yedeskithophu.
I-X79 uNkulunkulu akubusise, futhi kuzilungiselelo zamandla ungafaka ikhompyutha yakho kwimodi yokusebenza ephezulu. Lapha futhi ungashintsha amasethingi wokumisa okhethiwe kanye namandla we-PCIe. Futhi ngokujwayelekile, lokhu kusiza kuphela ukwenza umshini oshesha kakhulu, konke okuyiqiniso, ukusetshenziswa kwamandla aphezulu.
Ngakho-ke uma usebenzisa i-laptop qaphela, ungahle ufune nje ukuqala nge-h C6 ku-BiOS bese uyibiza ngosuku. Futhi-ke, uma uphelelwa yilawo ma-BSoD noma ama-Freeze ungawabiza ngosuku. Inombolo yesithathu, amamojula wememori ayiphutha.
Lokhu kunzima ukukuxilonga ngoba kwesinye isikhathi kuba okungahleliwe ngokuphelele emvelweni futhi kungadlula okunye kokuhlolwa kokuxilongwa bese kuba yi-bam, ngokuzumayo ugxume ngesikrini esiluhlaza okwesibhakabhaka noma ngokuphahlazeka kohlelo ngaphandle kwesizathu noma ngezikhathi ezingavamile ngenxa ezinkingeni zakho zesikrini ekubeni ngaleyo ndlela engcono ukusebenzisa iMemTest86 Plus futhi uyigcine isebenza amahora ambalwa. Ukudlula kuzo zonke izivivinyo kubeka umthwalo osindayo kwimemori futhi uma imemori inesiphazamisi imvamisa izophuma kulesi sivivinyo sokucindezelwa esinganginikanga umphumela omuhle noma owamanga ongemuhle. Ukwenza lolu hlelo lusebenze nje ukululanda, dala i-USB ebhuthayo, bese uqala ku-MemTest86 futhi ulungele ukuhamba anginaso isikhathi esiningi futhi awufuni ukwenza lokhu kuqaleke futhi awukwazi Uma uma ungafuni ukusebenzisa i-MemTest86 ungazama ukusebenzisa i-memory stick eyodwa ngasikhathi, noma uma unenduku eyodwa yememori kwikhompyutha yakho ungazama ukuyishintshela enye induku yememori ngoba ngesikhathi sami ngakha ama-PC Angikaze ngibe nezinti ezimbili zememori ezaphuka ngasikhathi sinye, futhi ngakhe amakhompyutha amaningi ngakho-ke lokhu akuvamile.
ingemuva ledeskithophu le-examsoft
Uma lokhu kuke kwenzeka ufana nomunye walabo abawine iLotto, kodwa ngendlela engeyinhle. Noma kunjalo, uma uzithola unenkinga yememori ngekhompyutha yakho, yeka ukubanda noma izikrini eziluhlaza okwesibhakabhaka okufanele ube nazo. Inombolo yesine ukungahambelani kwehardware.
Lokhu kwesinye isikhathi kungenzeka lapho i-RAM ingasebenzi nebhodi lomama elithile, noma ngokumane, futhi kulokhu kuyamangaza ukusebenzisa ilayisense ye-chipset eshibhile, njenge-H61 uma kuqhathaniswa nebhodi lomama le-Z68 noma i-H110 Motherboard uma kuqhathaniswa ne-Z170. Ngithole ukuthi amanye amabhodi womama wesabelomali awanalo ikhono lokuqalisa amamojula wememori ehlukene we-DDR3 kusuka kubakhiqizi abahlukene ngasikhathi sinye. Uma ngabe le kuyinkinga impela ngingahle ngiphakamise ukuthi ngizame imemori stick eyodwa ngasikhathi sinye futhi vele ngizame isimo futhi ngifuna ukuthola enye imemori stick noma i-motherboard, ngeshwa ezinye izinkinga ezinjengalezi azinakugwemeka futhi zingelapheki.
Enye inkinga ejwayelekile ukusebenzisa i-adapter engenantambo ye-PCI noma i-PCIe futhi abashayeli abangafaki nje futhi uma uwafaka bavele bakunikeze i-BSoD, njengakudala, ngine-module ye-D-Link nalapho ngivula ikhompyutha isebenze ngaphambi kokuba imodyuli ifakiwe kepha ngemuva kwalokho ngemuva kokungena kwami ​​ku-Windows, bang, BSoD, lokhu kungadala ukukhathazeka okuningi, futhi kulokhu uma uthenga ucezu olusha lwe-hardware futhi lokhu kwenzeka vele ulibuyise esitolo bese uthola imbuyiselo bese uzama olunye uhlobo lomkhiqizo. Ekugcineni, kubathengi, futhi akufanele sisetshenziswe njengabahloli be-beta, kungadala ikhanda elibi kakhulu. Yize izingqinamba eziningi zokungahambisani kwehardware zingavela ezintweni ezinjengamakhadi womsindo.
Njengamamojula angenazintambo angadala ezinye izinkinga, noma naku-Windows 7, ngokwesibonelo, kodwa-ke uma uthuthukela ku-Windows 10, bang, eyeka ukusebenza. Isivumelwano esifanayo, zisindise ikhanda bese ususa le ngxenye eyinkinga yempilo yakho. Futhi uma uhamba nenombolo yesihlanu, kungukuphakelwa kwamandla okungahambi kahle noma okungekho kwamandla.
Lokhu kunzima kakhulu ukukuxilonga kwesinye isikhathi, futhi empeleni, akuvamile ukuthi kuvele selokhu ngaqala ukwakha amakhompyutha. Yazi, angisebenzisi amandla we-junk, futhi bengilokhu ngakha futhi ngicabanga isikhathi eside, kepha lokho akusho ukuthi kungasebenza. Angeke futhi kungenzeka.
Ngokuyinhloko inkinga lapha ukuthi ngokunikezwa kwamandla okuyiphutha, ikhompyutha yakho ngeke nje ivuleke noma ibe nesikrini esiluhlaza okwesibhakabhaka noma imane iqhume nezinye izingqinamba ezingavela njengokuhle ukuthi ikhompyutha yakho ibonakala ilungile kepha kukhona lelo phunga elishisayo elixakile, futhi akuyona iphunga le-hardware esanda kuvulwa, lokho kwehlukile. Kuyiphunga elihlala nje lingene ekhaleni lakho. Uma uzwa leli phunga, makhosikazi, zenzeleni umusa, bambelela, ivale iPC yakho ngokushesha, thola umthombo wephunga bese ususa leyo ngxenye ASAP.
Lokhu akusebenzi ekunikezelweni kwamandla kuphela kepha nakwezinye izingxenye zohlelo lwakho, noma i-99% yesikhathi bekukhona iphunga elingajwayelekile elivela ku-PC yakho lisuka ku-adaptha yamandla, lokho kungukuhlangenwe nakho kwami ​​nje. Ngakho-ke thola njalo zonke izingxenye zakho ze-pc amandla kagesi angconywana kunaleyo eshibhile eshibhile abayithengisayo, kusuka kumkhiqizo ongakaze uzwe ngawo e-Australia izwe elithenjisiwe futhi uneBhajethi eyodwa, ngisho nePSU efana neCorsair I-VS350 izoba ngamamayela angcono kune-680 watt PSU engagagulwanga ngegama engacishe ifiphaze ngesikhathi esifanele hhayi ukuzithatha nayo kuphela, kodwa nokuthatha enye i-hardware nayo, noma nendlu yakho yonke. Ungazibeki engcupheni, njengalabo bathengisi abasebenzisa i-seedy kusuka eGumtree noma ku-Facebook.
Futhi inkinga yokugcina yamandla kagesi, yiqiniso, ukunikezwa kwamandla. Abanye abantu bathenga izimpahla zamandla ezishibhile ezingama-watt ezingama-500 becabanga ukuthi bangafaka amandla wonke ama-GTX 1070s abo, kulungile, bese kuthi lapho beqala umdlalo bese bethola ukuthi ikhompyutha yabo ivaliwe nje, kungenxa yokuthi ama-watts angama-500-Amandla kagesi, njengoba kushiwo ngenhla, okungenamsoco. Ngokuvamile kuzofanele usebenzise imali enesizotha ku-PSU uma ubuyisela izinto eziphakathi naphezulu ekugcineni.
Uma udinga ukuthola amandla kagesi ahloniphekile, ngizongeza ezinye izixhumanisi encazelweni engezansi. Kepha kubantu abaningi, ukunikezwa kwamandla okuqinile kwe-650 watt kuzokumboza iminyaka. Woza, futhi ngeke yephule ibhange, futhi izokwazi ukuthwalwa kusuka kunoma iyiphi i-PC oyakhayo, noma ngabe kusho ukuthini ukuthi ungayisebenzisa kabusha inkinobho.
Ngazise esigabeni sokuphawula ngezansi yiziphi izingqinamba zePr ezixake kakhulu ongene kuzo uma kukhulunywa ngezikrini eziluhlaza okwesibhakabhaka noma ukuqandisa noma izingqinamba ezingeza nama-PC wokwakha. Njengenjwayelo, jabulela ukufunda imicabango nemibono yakho, futhi ngizokubamba kwesinye isihloko se-tech kungekudala. Ungakhohlwa ukubheka abaxhasi be-athikili yanamuhla i-LastPass, ongazama mahhala ngokuphelele, izixhumanisi encazelweni engezansi, futhi ngizokubamba kolandelayo.
Ngilungisa kanjani i-Blue Screen of Death 2020?
Okuvame kakhuluIphutha le-BSODimibiko
Hlola ukusebenza kwabalandeli, i-PC ehlanzekile noma hlola imvelo uma kudingeka. Hlola umsebenzi we-hard drive; sesha bese usebenzisa 'chkdsk' kumenyu yokuqala. Bheka ukusebenza kwenduku ye-RAM nge-MemTest, buyisela i-Hardware uma kunesidingo. Bheka ukusebenza kwenduku ye-RAM nge-MemTest, buyisela i-Hardware uma kunesidingo.
Ngabe i-CSGO iyafa ngo-2020?
I-Counter-Strike: I-Global Offful inesisekelo somdlali esihlukile esithanda ukuzonda umdlalo. KuhleloI-CSGOumbuso, ukuqhathaniswa kwesidubuli sikaValve nayo yonke imidlalo ye-FPS entsha kuyinto ejwayelekile; amaqiniso ikakhulukazi awasebenzi. ... Counter Strike bekulokhuukufakule minyaka engama-20 edlule, futhi cishe sizoqhubeka nokufa eminyakeni engama-20 ezayo.5 uNovemba. 2020
I-Project Tax Iza Futhi Izobulala i-CS Khohlwa Wonke Ama-Maledas Afunwayo Ngaphambi Kwalesosikhathi EsehlukileProject X Inikeza I-Gameplay Entsha Futhi Engcono Ithuthukisa Ukudlala Kwethimba Ngenkathi Inikezela I-Sky High High Skill Cap Yokukhanyisa Abantu Abanethalente Iphrojekthi X ngokungangabazeki izokwakha eyayo eyaziwayo futhi indawo yokuncintisana enenzuzo enkulu lo mdlalo omusha awunawo umphakathi ofanayo osuphelelwe yisikhathi kube neziteleka eziphikisayo ezihlaselwe iminyaka sekuyisiqalo esisha futhi kuzohlala kunjalo futhi kunomlingo engikukhumbulayo lapho i-csgo iphuma okokuqala ngine iningi labanye abadlali beBeat kalula futhi liwine imidlalo yami eminingi umdlalo ubumnandi kakhulu, bekuyisipiliyoni esisha futhi esiqabulayo kulezi zinsuku angikaze ngikwenze lokho kahle ngoba ngenxa yokwenza wonke umuntu ufana nami. Eminye ingcono kakhulu kepha lokho kungenxa yokuthi umdlalo unenkinga yokukopela kepha ku-Project XI ungakwazi ukushaya kalula iningi labanye Imidlalo Imidlalo imnandi kakhulu, yinto entsha neqabulayo ngalo Mdlalo omusha ngijabule ukukhuphuka izigaba zayo bese uhamba pro. Angikaze ngizizwe kanjena selokhu ngakwenza lokhu kwi-CSGO yonke leyo minyaka eyedlule kepha kwafika isikhathi ngalo mdlalo, uma nje ngikwenzile ngeProject X kuzohluka, ungamane ungithathele wona Uthole kuphela uma bheka i-CS, bheka ukubalwa kwesidlali ukuze ubone ukuthi ngumdlalo we-TED, emahoreni angu-12 edlule yehlile isuka kubadlali abangaphezu kwesigidi yaya kwesigamu nje futhi ingaqhubekela phambili iProject X ngumdlalo odlalwa kakhulu ngoba njengamanje okubukwa kakhulu kuTwitch, abasakazi abakhulu bangena kuyo, okuwubufakazi bokuthi kufanele kube ngumdlalo omuhle kunabo bonke, abakwazi ukuqhubeka nokudlala noma ukukhiqiza okuqukethwe kwamanye amaphrojekthi wegeyimu abathuthukisi be-X banjengcono kakhulu kune-CSghosts - wena nje kufanele ubuke izindatshana zonjiniyela ukuze uzibone zinentshisekelo futhi zazi kahle ukuthi thina njengabadlali bamageyimu sifuna ini, izinto ezifana ne-good hit reg.
I-CSgoes Hit-Reg ibiyiphuzu lokuxabana iminyaka, uma uphuthelwa isibhamu akusikho ukuthi ukugejile noma ezinye zezinto eziningi noma ama-tradeoffs ahlobene nokudlala i-inthanethi ngenxa yomdlalo umkhaza ongu-64 uma lokho okukholelwayo, lapho-ke ungahle ucabange ukuthi ngalolo phawu olungu-128, iProject X izoxazulula zonke izinkinga ze-game hit reg. Ngiqonde ukuthi uma ngizama ukuthuthukisa umdlalo omusha nakanjani ngifuna ukumemezela ukuthi kunamaseva wamathikithi angama-128 uma ngifuna ukuheha umphakathi we-csgo kwaba yilowo nyaka odlule esivivinyweni esijulile esisodwa ngokuqhathanisa imikhaza engu-64 uma kuqhathaniswa ne-128, lapho kwakungekho bufakazi bokuthi abantu bangezwa umehluko u-128 tick ungcono noma wamukelwa ngaphandle kwesizathu ngicabanga ngoba yilokho abantu abafuna ukukuzwa futhi akuyona nje i-hit Regin csgo engenayo i-g ame engakatholi ukuvuselelwa okukhulu eminyakeni, ngaphandle kwezindlela ezintsha zomdlalo, ukusebenza, amakhadi ezimonyo, izindlela zokulwa nokukopela, i-trust-to-play trust factor nokulungiswa kwamaphutha okuvamile, yini asenzele yona i-Valve, okuwukuphela kwesizathu esenza bangeze izindaba ukwenza imali njengalo msebenzi wakamuva futhi sidinga ukukhononda nganoma yikuphi ukwengezwa okusha okwenza umdlalo ube mubi kakhulu ngenkathi ukhononda ngakho n ukuthi umdlalo awutholi izinto ezintsha ezanele. Bheka nje ukuthi uCsgo ushintshe kangakanani umdlalo weminyaka eyisishiyagalombili kulo nyaka odlule.Ngiyiqhathanise nenombolo yezibuyekezo nezici ezintsha i-Project X ebinazo, i-CS idlala umdlalo obucayi kakhulu yize ngingenalutho oluphikisana neProjekthi XI All okungcono kakhulu kuye imvamisa umphakathi osondelene nemidlalo enginenkinga nayo kubonakala kuyisiphukuphuku ukuthi njengomlandeli womdlalo ngifuna umdlalo ube mubi nginesiqiniseko sokuthi lapho nje kwenzeka ukugqoza, ubuwula buzokwenzeka, njenge Umlandeli wemidlalo ngifisa sengathi umdlalo omubi ushayisile, uma iphrojekthi x isabonwa njengeyinhle izokwazi ukuzakhela owayo umdlali isisekelo, ingakhula ize ibe nkulu kune-csgo, kepha njengomuntu othanda imidlalo ngoba ngiyayithanda imidlalo hhayi ngoba zihamba phambili njengamanje ngihlala ne-csgo manje ngoba ngiyawuthanda umdlalo engingakuqondi ukuthi kungani uma ucabanga ukuthi iphrojekthi x ingcono kune-csgo kungani ushiya Hhayi nje ukuyodlala kungani uyenza ? Ukubeka izinto ezinenzondo nezimbi kuma-csgoarticles kubonakala sengathi abanye abantu baqhuba imincintiswano yokuthandwa esikhundleni sokudlala izinto futhi bakujabulele, njengalabo bantu bafuna ukuzibeka ohlangothini, noma yini epholile, njengezaba zokuthukuthela phezu konke kungani ngingakaze ngikuqonde ngokugcwele ngifisa sengathi ungavele uthathe ingqondo yakho futhi ujabulele umdlalo ofuna ukuwudlala kakhulu.
Ngiyazi ukuthi bezingafani kodwa sengibonile amaphrojekthi amaningi avela kuX futhi kwenzeka into efanayo njalo lapho inkosi yabo kuyinto ezobulala i-csgo bavame ukuthandwa kakhulu abanye bahlala ngaleyo ndlela nokho bekwenza ngaleyo ndlela mhlawumbe ngeke kuqhubeke unomphela kepha ngiyagula ukukumemeza njalo lapho kuvela iphrojekthi entsha bese ngikhohlwa owathi uma ushintshela kuphrojekthi Y noma ubuyela e-csgo uma wenza lokho minyaka yonke Ukubikezela ukuphela komhlaba uzobe uqinisile ngesinye isikhathi, ngizokunikeza izeluleko ezinobungane, akulona icala ukuthanda noma ukudlala imidlalo engaphezu kweyodwa ngesikhathi empeleni kungenzeka ukuthi yinto enempilo ongayenza ngeProject X nayo uyijabulele, kepha ngena ngesimo esihle noma uzophela ngezinkinga ze-CS-Gos nje
Ingabe i-CS GO iyafa ngo-2019?
Muva nje ngehlobo le-2019,I-CSGOkwagcwala abadlali bethi umdlalo ubunguufilenomaukufa. Bukela iI-Counter-Strike'sUkubalwa komdlali we-2020, kuphephile ukusho ukuthi izinto sezishintshile.I-Counter-Strike: Kuyacasula Emhlabeni Wonkeisenamandla njengakuqala, futhi umdlali wayo ubala akubuyisele emuva lokho.Juni 16, 2020
Ungakwazi yini ukudlala i-CS GO esikrinini esiluhlaza okwesibhakabhaka?
I-Blue Screen KUPHELA ngenkathi idlala i-CS: GO. :: Counter-Strike: Izingxoxo Jikelele Ezihlaselayo Zomhlaba Wonke noma kungenzeka zingafaneleki ukubukwa emsebenzini. Okuncamelayo kulungiselelwe ukukuxwayisa lapho izithombe zingazwela.
Kungani ngithola i-BSoD njalo uma ngidlala i-CS GO?
Ngesikhathi samaviki wokugcina ama-3 noma ama-4 ngihlala njalo (1 yonke imidlalo emi-2 ngokulinganayo) ngathola i-BSOD ngenkathi ngidlala i-CS: GO. Lokhu kwenzeka kuphela ngenkathi kudlalwa lo mdlalo. Ayenzeki ngenkathi ishaja, noma yini .. Kepha maphakathi nomdlalo okungenze ngacabanga ngokugcwala ngokweqile kwe-CPU / GPU ..
Yini okufanele uyenze uma ungenayo i-BSOD emdlalweni wakho?
Uma uvame ukuba nama-BSo kunoma yimuphi umdlalo (noma ukuqala kabusha okungahleliwe ngaphandle kwe-BSoD), qapha izinto zakho (usebenzisa i-'Speccy 'ngokwesibonelo) ukubheka amazinga okushisa kakhulu angahle abangele. Kunoma ikuphi, ngizovuselela lokhu okuthunyelwe ngama-tidbits uma kukhona ezinye izixazululo ezitholakele zalokhu.
Ngingazi kanjani ukuthi i-PC yami ine-BSoD?
Kungakusiza uma usebenzisa i-PC yokudlala esezingeni lokungena. Uma uvame ukuba nama-BSo kunoma yimuphi umdlalo (noma ukuqala kabusha okungahleliwe ngaphandle kwe-BSoD), qapha izinto zakho (usebenzisa i-'Speccy 'ngokwesibonelo) ukubheka amazinga okushisa kakhulu angahle abangele. Kunoma ikuphi, ngizovuselela lokhu okuthunyelwe ngama-tidbits uma kukhona ezinye izixazululo ezitholakele zalokhu.